naagaha futada macaanle - iftineducation.com
naagaha futada macaanle
iftineducation.com – Xaliimooyinka Weerarka Qaada Xiliga Ay Ciyaarta Socoto ayaa waxaa la ogaaday in ka qancin badan yihiin ku aan iyaga wax weerar ah geysan oo un iska yaala meeshooda.
Cilmibaaris Ku qotanta dareenka hablaha oo ay sameeysay Hablaha Media Network HMN ayaa waxaa lagu ogaaday xaliimoyinkaan in ay badanaa raggu jecel yihiin, intii uu socday daraasaadkan ayaa waxaa su’aalo farabadan lagu weydiiyay Ragga Soomaalida oo Aduunka daafahiisa ku kala sugan badan koodna waxa ay ka cabanayaan in iyaga lee uu qaas ku yahay habeen kasto in ay weerarka qaadaan.
Xaliimo Weerar Qaadi Rabto(c)Baashaal.hablaha.com
Ragga badan kood ayaa waxa ay amaan kala dul dheceen Xaliimooyinka iyaga weerarka bilaaba Wallow ay sheegeen in ay Soomaalidu ku yaryihiin Xaliimooyinkaasi. Daraasaddan ayaa waxa ay dib u kicin doonta marka ay aqriyaan habla fara badan badan kuwaasi oo xishood dartii ku muujin waayay Weerarkooda xagga sarriirta.
Hablaha ayaa waxa ay kula kedisanyihiin dareenka sida ay ragubba ugu kale kedisanyiin qof walibana waxa uu leeyahay meelo lama taabtaan ah oo xiliga ciyaarta socota ay muhiim tahay in ay labda dhinac wax badan iska kala ogaadaan si durbaba loo kala abaaro barahaasi ciyaarta kululeeyo.
”Sir Muhiim ah” Arrimaha Ugu Muhiimsan Isku Diyaarinta Ciyaarta Sariirta.